नाशपाती को "मह" उच्च उपज र फल को प्रारम्भिक उपस्थिति लागि रुचाउनु माली अद्भुत किसिम (3-5 वर्षको लागि fruition मा आउँछ)। यो लेट-ग्रेड, शरद ऋतु समयमा शाखा मा succinic फल पकड संग greenish-पहेंलो रङ्ग। एक बल्लतल्ल देख्न सकिने अमिलो स्वाद र मह बलियो सुगन्ध संग, मिठाई र रसदार - शरीरका तेल, स्वाद छ। विविधता राम्रो transportability, जाडो hardiness र रोग प्रतिरोध छ। उचित हेरविचार संग, एक जवान रूख संग 110 किलो रसदार ठूलो (अप गर्न 600 G) फल सम्म प्राप्त गर्न सक्छ।
नासपाती "मह": विवरण, तस्बिर, समीक्षा, रोपण
रोपण लागि अनुकूल अवधि - शरद ऋतु, पहिलो चिसो अघि defoliation पछि। बिरुवा, वसन्त मा लगाएको गर्न सकिन्छ मई को शुरुवात अघि। यसलाई मृगौला भंग गर्न समय छैन महत्त्वपूर्ण छ।
नासपाती "मह" गाह्रो चाल प्रत्यारोपण, त्यसैले रोपण यो एक स्थायी ठाउँ चयन गर्न आवश्यक छ। साइट उत्तरी हावा द्वारा बन्द, राम्रो रोशन गर्नुपर्छ। सुरक्षा एक उच्च बार वा भवन रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। मह नाशपाती को lowland, क्षेत्रमा उनको खराब लागि नजिकैको माटो पानी संग मन छैन। यस्तो ठाउँमा, मूल सिस्टम रूख कमजोर र मर्न सक्छ, rotting छ। अम्लीय soils नाशपाती लागि उपयुक्त छैन।
फल फलाउन गर्न सुरु गर्नु अघि "मह" गर्न नासपाती, यो अनुकूल अवस्था बिरुवा सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो अवतरण पिट अग्रिम तयार महत्त्वपूर्ण छ। 100 सेमी छेद को एक जवान बिरुवा व्यास लागि - -। 50 सेमी गहिराई -। 80 सेमी पृथ्वी को उर्वर तह र प्वाल वरिपरि बाँकी गर्नुपर्छ (यसलाई थप आवश्यक हुनेछ) रूखको बलियो विकास 80 सेमी को एक व्यास र पिट गहिराई आवश्यक छ। छेद मल गर्नुपर्छ:
धरण, पीट -2-3बाल्टिन;
भद्दा बालुवा - 1 -2बाल्टिन;
पोटासियम सल्फेट -3चमचा;
superphosphate - 1 कप।
पिट मा Fertilized पोषक, मिश्रण पानी को 2-3 बाल्टिन खन्याउन र एक हप्ताको लागि छोड्न छ। पिट र आवश्यक प्रशिक्षण र एउटै आयाम columnar नासपाती "मह" (विवरण, फोटो, तल समीक्षाएँ)।
रोपण अघि, तपाईं अवतरण पिट को केन्द्र मा ड्राइव उच्च 50 सेमी आवश्यक पेग। द किला एक समर्थन रूपमा सेवा र तात्दै, रूख पनि किला को उत्तर पक्षमा राखिएको हुनुपर्छ बाट बिरुवा जोगाउन हुनेछ।
यो एक mound गठन ताकि पिट उर्वर तह (छुट्याइएको एक) भर्न जमीन आवश्यक छ।
क्रप पत्ते बिरुवा देखि, जरा बिग्रेको छ। नासपाती गर्न "मह" राम्रो मूल लिएको छ, जरा IAA एउटा earthen Mash मा डूबा गर्न आवश्यक छ।
रूख तपाईं पृथ्वी mound मा एक प्वाल राख्न र बिस्तारै सबै को जरा फैलाउन आवश्यक छ। बिस्तारै भुइँमा खन्याउन, यो राम्रो rammed माटो पानी बगाउन सम्भव छ।
रूख मूल कलर 5-6 सेमी मा माटो स्तर माथि हुनुपर्छ।
बिरुवा एक किला कपडा वा फिलिम संलग्न गर्न आवश्यक छ। सीमा मा अवतरण पिट जमीन देखि एक तकिया बनाउन र पानी दुई बाल्टिन खन्याउन।
यो ग्रेड बारेमा माली धेरै राम्रो समीक्षा। रूख सुन्दर, सघन, र फल धेरै स्वादिष्ट र रसदार छन्।
जब एकदम प्रचुर हजारी लागि बिरुवा को शरद ऋतु रोपण। वसन्त रोपण पानी रूख अक्सर नासपाती "मह" हजारी गर्न माग रूपमा छ। Norma - 1 पानी2बाल्टिन लागि प्रत्येक3दिन। तातो दिन मा तपाईं हरेक दिन एक नासपाती पानी हाले गर्न आवश्यक छ। proryhlit र zamulchirovat सुक्खा घाँस टीन पछि माटो।
संयंत्र को प्वालमा लैंडिंग पर्याप्त गरिएको छ देखि पहिलो वर्ष खाद गर्न आवश्यक छैन। दोस्रो वर्षमा तपाईं जैविक र खनिज मल प्रयोग गर्न आवश्यक छ। वसन्त - Organics (मल) को2किलो / m2 गणना मा प्रवेश छ र माटो संग मिश्रित छ। यस्तो रुचाउने बाहिर प्रत्येक वसन्त रूखहरू4पुरानो वर्ष आवश्यक पोटासियम र फस्फोरस आवश्यक लगे छ। मल एक संगीन कुदाल छ।
फूल अघि रूखहरू superphosphate स्प्रे समाधान (3%) आवश्यक छ। यो उत्पादकत्व वृद्धि र काठ यूरिया समाधान (2%) बृद्धि हुनेछ। प्रति 1 m2 खरानी को4कप (जस्तै रुचाउने लेट गर्मी मा बाहिर छ): अम्लीय soils नासपाती बढ्दै क्याल्सियम आवश्यक छ।
यस रुखको रस प्रवाह अघि वसन्त मा उत्पादित नाशपाती छाँट्ने।
वार्षिक नासपाती "मह" छाँट्ने आवश्यक छैन।
हामी एक दुई वर्ष रूख मुकुट गठन गर्न आवश्यक छ। 2-3 विकास शाखा चयन गर्नुहोस्, र 1/3 लम्बाइ तिनीहरूलाई काट। बाँकी सूत्रहरू (तल सूत्रहरू मा कुंडलाकार आकार) को घन्टी मा कटौती। केन्द्रीय सञ्चालकको 15-20 सेमी कटौती।
तीन वर्ष मा बिरुवाहरु दोस्रो टियर गठन। दुई राम्ररी विकास शाखा पहिलो स्तर देखि 50-60 सेन्टीमिटरको उचाइ मा कटौती गर्नुपर्छ। स्तरों बीच लाइन छोटो। केन्द्रीय सञ्चालकको 15-20 सेमी कटौती।
चार वर्ष बिरुवाहरु 40 सेमी द्वारा दोस्रो स्तर माथि अर्को शाखा राख्नु। को स्तरों बीच शाखा छोटो हुन आवश्यक छ।
Columnar नासपाती "मह": विवरण, फोटो, समीक्षा
नासपाती columnar सामान्य रूपमा ठ्याक्कै त्यही रोपण। यो माटो बाहिर सुकाउने रोक्न महत्त्वपूर्ण छ, यो एक गीली (पीट, sawdust, पराल) प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। को नासपाती को पहिलो वर्ष मा एक राम्रो फसल दिन छैन, रूख सबै तन्तु हटाउन राम्रो छ। वसन्त मा र गर्मी को बीचमा मा चिकन गोबर, नाइट्रेट वा यूरिया खुवाउन आवश्यक छ। Columnar नासपाती नियमित किरा, चिसो बाट आश्रय रूख तल्लो भाग स्प्रे महत्त्वपूर्ण।
यस प्रकारको को undoubted लाभ - रोग र चिसो, unpretentious हेरविचार गर्न अत्यधिक प्रतिरोधी। कि नासपाती चिसो सम्म फल फलाउँछ बारेमा धेरै उल्लेख माली कुरा फल तपाईं हात तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्न आवश्यक त, बन्द पर्दैन।
प्रशंसा टिप्पणी उत्कृष्ट hardiness फल को स्वाद संकेत गर्छ। मात्र कि माली समीक्षा व्यास भन्दा कम मीटर कब्जे, संकुचित कम रूख रूपमा वर्णन, "मह" नासपाती आकर्षित गर्छ। एकै समयमा अविश्वसनीय प्रशस्त fruiting मा।
Acacia सेतो, सुगन्धित ...
सुनगाभाहरू लागि succinic एसिड: लागू कसरी?
Conium maculatum (उर्फ speckled) - एक विषालु बोट! सावधानीपूर्वक प्रयोग ...
टमाटर Snowdrop। यी विभिन्न टमाटर
मिमोसा star name कहाँ बढ्दै? मिमोसा star name - बोट। जहाँ मिमोसा star name रूस बढ्दै?
हामी फूल, कसरी बढ्न सिक्न "एक महिलाको आनन्द।" घरमा तिनीहरूलाई हेरचाह
Yaroslavl "इवान" मा रेस्टुरेन्ट: ठेगाना, समीक्षा, मेनु
जन्म गर्छ spirals सम्भव छ पछि?
के ब्लेंडर राम्रो छनौट र तुलना।
आधुनिक निर्माण मा पुस्तिका प्रोफाइल
सर्कस "Eluaz": समीक्षा। सर्कस "Eluaz" - आईडी: समीक्षा
कसरी फाइलहरू बाट एक आईएसओ छवि बनाउन
स्वादिष्ट Tabasco सस: नुस्खा सजिलो